Ukukhishwa kwe-SAA noma izindlu zangasese zezikole? | Scrolla Izindaba
Ukukhishwa kwe-SAA noma izindlu zangasese zezikole?
Abaningi bamangele ngenkathi uNgqongqoshe wezeMfundo uAngie Motshega ecashunwa ezinkundleni zokuxhumana ethi kuzodla u-R10 billion ukufaka wonke amathoyilethi omgodi ezikoleni zaseNingizimu Afrika.
Kubonakale kuyimpama ebusweni kuNgqongqoshe wezeziMali osebenzisana naye kwikhabhinethi uTito Mboweni othembise imali efanayo neyokutakula i-South African Airways ngayizolo.
Empeleni lesisho besithunyelwe kumsebenzisi we-twitter onegama okusolwa ukuthi “nguSunani Punani”.
“UPunani” ubhale kabusha omunye umsebenzisi, uMixo Ngoveni, othumele “ukuthi kuyobhekwa izikole ezingenazo izindlu zangasese”.
Ngokwebalazwe likaNgoveni, izikole ezingenazo izindlu zangasese zingaphezu kwengxenye ewuhhafu yeNingizimu Afrika.
Iningi labantu libone ngokusebenzisa ama-tweets njengamanga.
Kepha kanye izindaba ezingamanga zazenza umsebenzi womphakathi owusizo.
Isimo samathoyilethi ezikoleni zaseNingizimu Afrika siyinsakavukela selokhu uMichael Komape angena kwesinye e-Limpopo ngo-2014 waminza.
Eminyakeni emine kamuva uOmari Monono, naye wase-Limpopo, wehlelwa yileso simo.
Ethula isitatimende senqubomgomo yesabelomali sesikhathi esiphakathi ngoLwesithathu uMboweni uthe umgcinimafa uzokwaba imali eyizigidi eziyi-R10.5 ukuqalisa uhlelo lokutakula i-South African Airways.
Lokhu kungaphezulu kwemali eyizigidi eziyi-R16.4 osevele ufakiwe enkampanini egulayo.
I-SAA kubikwa ukuthi yagcina ukwenza inzuzo kowezi-2011 kanti iqophe ukulahlekelwa yimali eyisigidi esiyi-R1.97 ngekota yokuqala yonyaka wezimali kowezi-2020.
Lokho kwakungaphambi kokuba i-Covid alahle phansi emboni yezindiza.
I-Organisation Undoing Tax Abuse (OUTA) ikugxeke kabukhali ukutakulwa kukaMboweni yaphinde yanxenxa nokuthi kudube intela.
I-OUTA ichaza i-SAA “njengephrojekthi eyize” “ephanga abampofu” futhi ethatha okunye okubalulekile.